Mogadishu Journal » 2021 » March » 21
Ronald Koeman iyo madaxweynaha cusub ee Joan Laporta ayaa khariidayn doona mustaqbalka kooxda Barcelona inta lagu jiro fasaxa xulalka, in Dutch-ka oo la aadana waxay la socon doontaa dhaqanka Camp Nou. Naadiga oo beryahanba magacyo u ahaa xiddigo waa weyn oo reer Holland ah ayaa...
Five civilians, including a child, were killed after government forces fired on a hospital in Atareb, a town in rural western Aleppo. 21 Mar 2021|Updated: 2 hours agoCorrection21 Mar 2021A previous version of this article stated that Atareb was in Idlib. This was incorrect....
(Akhriso) Taliska Booliska Somalia oo ka jawaabay hadal ka soo yeeray Deni
Muqdisho:-Warqad kasoo baxday Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliya ayaa lagu sheegay ineysan jirin ciidan dheeri ah oo lagu daabulay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Waxaa sidoo kale warqada lagu sheegay in ciidanka Booliska Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM...
Saciid Deni oo sheegay in lagu soo weeraray Xalane, shakina geliyey shirka beri
Madaxweynaha Puntland Saciid C/llaahi Deni ayaa ayaa sheegay in aanu war u heyn shirka berri ee la sheegay inuu ka furmayo teendhada Afisyooni ee ku taalla garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. “Waxaan halkaan nimid kaddib markii aan marti qaad ka helnay beesha caalamka...
James Swan iyo Madaxweyne Cali Guudlaawe oo kawada hadlay arimo muhiim ah (Sawirro)
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Cali Guudlaawe Xuseen oo howlo shaqo u jooga Magaalada Muqdisho ayaa maanta Hoyga uu degan yahay ku Qaabilay Wakiilka Xoghaya Guud ee Qaramada Midoobe Ambasador Jemes Swan. Kulankaan ayaa aad looga hadlay Arrimaha...
Madaxweyne Lafta Gareen oo si heer sare ah Muqdisho loogu soo dhaweeyay (Sawirro)
Muqdisho:-Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta-gareen oo maalmihii lasoo dhaafay safar shaqo ku joogay wadanka Turkiga ayaa goordhaw kasoo degay garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho. Lafta Gareen Waxaana garoonka...
Madasha Badbaado Qaran oo Warqad xasaasi ah u dirtay Beesha Caalamka (Akhriso)
Muqdisho:-Madasha Badbaado Qaran ee dhawaan looga dhawaaqay magaalada Muqdisho ayaa warqad xasaasi ah u dirtay Wakiilada beesha Caalamka u jooga Soomaaliya iyo qaar kamid ah wadamada sida weyn u daneeya Soomaaliya. Warqadan Madasha Badbaado Qaran u dirtay Beesha caalamka ayaa...